तेल उत्पादकहरु' कंसोर्टियम परीक्षण कागज रेकर्ड पालन गरेमा प्रतिस्थापन गर्न blockchain आधारित प्रणाली - Blockchain समाचार
तेल उत्पादकहरु’ कंसोर्टियम परीक्षण कागज रेकर्ड पालन गरेमा प्रतिस्थापन गर्न blockchain आधारित प्रणाली
विश्वव्यापी, समुद्र टैंकरों को आकार5फुटबल क्षेत्रहरू एक दैनिक आधार मा जहाजमा यात्रा गर्नु सेट, आफ्नो कार्गो ट्रयाक गर्न सट्टा blockchain प्रविधि कागज रेकर्ड प्रयोग. यो बिल-को-lading चाँडै Bitcoin ट्र्याक र प्रमाणित गर्न प्रयोग नै विधिहरू प्रतिस्थापन गर्न संभावना छ, जो Blockchain प्रविधिको साझेदारी अनलाइन लेजर छ.
"बाटो हामी हाम्रो शीर्षक स्थानान्तरण र पोस्ट व्यापार कार्यान्वयन कागजी कार्रवाई मा धेरै भारी छ के,"Alistair क्रस भने, को सञ्चालन Mercuria ऊर्जा समूह लिमिटेड वैश्विक टाउको. "अनि कागजी कार्रवाई साँच्चै सय वर्ष को अन्तिम जोडी भन्दा विकसित भएको छैन।"
तेल उत्पादकहरु एक कंसोर्टियम, व्यापारीहरु, र बैंकरहरुलाई पहिले नै कारोबार समय कम जो सिस्टम परीक्षण गरेको छ, एक ठूलो तेल ट्यांकर बिक्री को, बाट3घण्टा 25 मिनेट.
यसबाहेक, कागज कागजातहरू ठगी गर्न susceptible रहने, त्यसैले व्यापारीहरु एक थप सुरक्षित वैकल्पिक रुचि राख्नुहुन्छ.
गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. Er...
सुरक्षा उपाय को बेवास्ता ...
हे Altcoin दैनिक टोली! If yo...
अघिल्लो पोस्ट:Bitcoin स्वीकार गर्न आयरल्याण्ड मा ठूलो homebuilder
अर्को पोस्ट:Revolut मंच गर्न गुप्त व्यापार थप्न 1st समय पनि खण्डन
मार्च 15, 2018 मा 8:40 AM
मार्च 27, 2018 मा 8:01 AM